Ukusika Amapuleti Cnc - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ukusika Amapuleti Cnc)
Ukuthengisa okushisayo kwe-carbon fiber plates cnc ukusika
Ukuthengiswa okushisayo kwamapuleti e-3K kaboni fiber cnc ukusika Sisekela Ishidi Le-Fibbon Ye-Carbon Egcwele, Ishidi Le-Carbon Glass, Ishidi le-G10 Glass Fibre, iphepha lekhabhoni le-color, zonke izingqimba ze-carbon 3 sheet, i-quasi-isotropic carbon sheet . Sine-Carbon Sheets eminingi Egcwele esitokisini, sisekela...
Izinga eliphezulu kakhulu le-cnc 3k carbon fiber plates
Izinga eliphezulu kakhulu le-cnc 3k carbon fiber plates Incazelo Yomkhiqizo Sinikezela ngamapuleti e-carbon fiber egcwele egcwele (i-1k, 3k i-carbon fiber ephelele, wonke amapuleti we-3k izingqimba, ipuleti lekhabhoni enemibala, njll.). Ziyizililo eziningi zekhabhoni ku-matrix we-epoxy. Akunandaba ukuthi uhlelo lwakho...
Ukusika okuphezulu kwe-CNC carbon fiber ukusika
I-Model No.: FDT97
Incazelo Yomkhiqizo Ukusika okuphezulu kwe-CNC carbon fiber ukusika I-Cnc Carbon Fibilting ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe. Futhi,...
3K Twill Matte Cnc Cutting Carbon Fiber Panels Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukutholwa kanzima. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kudingekile kuphela ukuthi...
Ukunemba okuphezulu okwenziwe ngokwezifiso kwe-CNC carbon fiber
I-Model No.: JHU76
Incazelo Yomkhiqizo Ukunemba okuphezulu okwenziwe ngokwezifiso kwe-CNC carbon fiber I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe....
ngokwezifiso CNC usike carbon fiber 4mm ipuleti
ngokwezifiso CNC usike carbon fiber 4mm ipuleti Ishidi le-Carbon fiber linamandla aphezulu kakhulu, isisindo esikhanyayo, ngokubukeka okucwebezelayo nokubonakala kokuqeda kukaMatte, lawa mashidi angasetshenziswa ukwakha izakhiwo eziqinile, ukudala izixhaso, noma ukwakha izingxenye zakho. Ibuye isetshenziswe kabanzi...
Intengo ephansi i-CNC yokusika i-carbon fiber sheet plate
I-Model No.: PIT54
Incazelo Yomkhiqizo Intengo ephansi i-CNC yokusika i-carbon fiber sheet plate I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe....
Yenza ngokwezifiso i-100% Carbon Fibre nge-CNC cut
I-Model No.: GDF096
Incazelo Yomkhiqizo Yenza ngokwezifiso i-100% Carbon Fibre nge-CNC cut I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe. Ubungako...
I-CNC Machining Custom Aluminium Clamp yekhamera
I-Model No.: NHG51
Incazelo Yomkhiqizo I-CNC Machining Custom Aluminium Clamp yekhamera IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe obhekene nezingxenye ze-Aluminium Machined , i-carbon fiber CNC Cutting Service And Logo Printa cishe iminyaka
ukusika izingxenye ze-cnc okhwaliti we-carbon fiber sheet
I-Model No.: HCF025
Incazelo Yomkhiqizo ukusika izingxenye ze-cnc okhwaliti we-carbon fiber sheet I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe....
I-CNC isike izingxenye ze-3K carbon fiber sheet
I-Model No.: KDF145
Incazelo Yomkhiqizo I-CNC isike izingxenye ze-3K carbon fiber sheet I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe. Ubungako...
ukusika ngokwezifiso i-carbon 3K CNC carbon fiber
I-Model No.: ASAN701
Incazelo Yomkhiqizo ukusika ngokwezifiso i-carbon 3K CNC carbon fiber I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole ifreyimu eyingqayizivele ukukhiqiza ama-drones abo emakethe. Senze ukubambisana okuningi nomkhiqizo abaningi abadumile futhi sithola impendulo eyengeziwe. Ubungako...
Ishidi le-Super solid cnc laser ukusika i-carbon fiber sheet
I-2,5 mm yeCarbon Fibre Matte Ephelele Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu kanye nezinto eziphezulu ze-modulus fiber ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Ukusika Amapuleti Cnc Ukuzisika Kwapuleti Ka-Cnc Ukusika Amapuleti Ekhabhoni Cnc ukusika amapuleti Cnc Ukusika Ipuleti Ukusika kweplate Cnc Ukusika Ipuleti Ye-Carbon Fibre Ukusikwa kwe-Aluminium Cnc
Ukusika Amapuleti Cnc Ukuzisika Kwapuleti Ka-Cnc Ukusika Amapuleti Ekhabhoni Cnc ukusika amapuleti Cnc Ukusika Ipuleti